HPV က သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လို ထိခိုက်စေနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ - Hello Sayarwon
Dr. Thurein Hlaing Win မှ ရေးသားသည်။ 06/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Human Papillomavirus (HPV)ဆိုတာ
Human Papillomavirus (HPV)ဆိုတာက လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် အများဆုံးကူးစက်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ HPVဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာကြောင့် လိင်အင်္ဂါတဝိုက်မှ ကြွက်နို့တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ လိင်တံကင်ဆာ၊ လည်ချောင်းကင်ဆာနဲ့ လျှာကင်ဆာလိုမျိုး ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ HPVဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ကင်ဆာမဖြစ်ရင်တောင်မှ လူမှု့ဘဝနေထိုင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ လိင်အင်္ဂါတဝိုက် ကြွက်နို့တွေဖြစ်တာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ HPVဗိုင်းရပ်စ်က လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပြီး တော်တော်များများက ဒီဝေဒနာကို အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေလောက်ပဲ စိုးရိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒီအယူအဆက အပြည့်အဝမမှန်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရလဲဆိုတာ သင်အနေနဲ့ ကလေးကို ငယ်ငယ်ကတည်းကHPV အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကို အောက်မှာ သေသေချာချာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Human Papillomavirus (HPV)ဆိုတာ ကမ္ဘာတလွှားမှာ အရမ်းအဖြစ်များနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးပါ။
HPVဗိုင်းရပ်စ်က အမျိုးအစား၁၀၀ကျော်ရှိနေပြီး ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေထဲက ၁၃မျိုးလောက်က ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
HPVဗိုင်းရပ်စ်က အဓိကအားဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်တာဖြစ်ပြီး လူအများစုက လိင်ဆက်ဆံပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာတင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံလိုက်ရတာပါ။
လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်တဲ့ HPVဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားကြောင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်ရတာပါ။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့အဖုအကျိတ်တွေ၊ အနာတွေရဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က HPVဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ( 16နဲ့ 18) HPVဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
HPVဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စအိုကင်ဆာ၊ မွေးလမ်းကြောင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ်ကင်ဆာနဲ့ လိင်တံကင်ဆာတွေ ဖြစ်ရတာလို့ လေ့လာချက်အထောက်အထားတွေအရသိရပါတယ်။
ဖွံဖြိုးမှုနိမ့်ကျတဲ့ဒေသတွေမှာ နေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဒုတိယအများဆုံးခံစားနေရတဲ့ရောဂါက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်ကအထိ လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာခံစားရသူ အရေအတွက် ၄၄၅ ၀၀၀ရှိပြီး (ကမ္ဘာတလွှားမှ ာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာခံစားနေရသူ အရေအတွက်က ၈၄ရာခိုင်နှုန်းထပ်တိုးလာခဲ့တယ်) လို့သိရပါတယ်။
၂၀၁၂ခုနှစ်အထိ စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရ အမျိုးသမီးဦးရေ၂၇၀၀၀၀လောက်ဟာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး သေဆုံးသူအရေအတွက်ရဲ့ ၈၅ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဝင်ငွေနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေက ဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါတဝိုက်မှာ ကြွက်နို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ HPVဗိုင်းရပ်စ်တွေက တစ်ခါတစ်ရံမှာ လိင်ဆက်ဆံစဉ် အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုကနေ တဆင့်ကူးစက်တာပါ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကလိင်အင်္ဂါတဝိုက်မှာ အတွေ့ရများပြီး ပါးစပ်နဲ့ လည်ပင်းတွေမှာလည်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့က လိင်အင်္ဂါတဝိုက်နဲ့ စအိုတဝိုက်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ နာကျင်မှုမရှိတဲ့ အဖုတွေပါ။ အရွယ်အစားနဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေကတော့ မတူနိုင်ပါဘူး။အချို့ကြွက်နို့တွေက အဖြူရောင်အချပ်လိုက်တွေ ဖြစ်ပြီး အချို့ကတော့ ပန်းဂေါ်ဖီလိုပုံစံမျိုးတွေပါ။ လိင်အင်္ဂါ ကြွက်နို့တွေကြောင့် ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် လူတစ်ယောက် ဘဝနေထိုင်မှုပေါ်မှာတော့ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
HPVကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါများနဲ့ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့များ
တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ရင်သွေးကို အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ အန္တရာယ်က ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ပြောရင် သင့်အနေနဲ့ အကြံပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်မှာလား။ မိဘအများစုကတော့ ချီတုံချတုံဖြစ်မနေဘဲ ဒီအဖြေကိုခေါင်းညိတ်ကြမှာပါ။ အကြောင်းကတော့ HPVကလိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးကို HPVကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးတာက ကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်ကိုတင် ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရင်သွေးရဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာမယ့် ကလေးငယ်ကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။
HPVကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာက လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့နဲ့ ကင်ဆာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ HPVဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့လုံးဝမထိတွေ့သေးဘူးခင် အပျိုဖော်၊လူပျိုဖော်မဝင်ခင်မှာ HPVကာကွယ်ဆေးထိုးတာက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာကအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးထားရင် ၁၀ နှစ်အထိ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့အထိတော့ HPVကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ မတွေ့ရပါဘူး။ အခြားကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးသလိုမျိုးဖျားတာ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းတာ၊ ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာက နီမြန်းနာကျင်တာလောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ မိမိရဲ့ရင်သွေးမှာ HPVဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက် မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Human Papillomavirus (HPV) Vaccines.https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-vaccine-fact-sheet#q8Accessed February 26, 2018.
HPV and genital warts.https://smartsexresource.com/topics/hpv-and-genital-wartsAccessedFebruary 26, 2018.
Marra, C., Ogilvie, G.,Gastonguay, L., Colley, L., Taylor, D. andMarra, F. (2009). Patients With GenitalWarts HaveaDecreased Quality of Life. Sexually Transmitted Diseases, 36(4), pp.258-260.Mortensen, G. and Larsen, H. (2010). The quality of life of patients with genital warts:aqualitativestudy. BMC Public Health, 10(1).